မေလ 2016 |4၏စာမျက်နှာ 64 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » မေ (စာမျက်နှာ 4)
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, အခြေအနေ ROOM တွင်
Turner တည်နေရာ: ဝါရှင်တန်ဒီစီအမေရိကန် Turner အသံလွှင့်စနစ်, Inc တချို့ကဗီဒီယိုအား & ဂရပ်ဖစ်အတွေ့အကြုံကို။ သင်, နေရာချထားသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိနှင့်ပြင်ဆင်ရန်ဗီဒီယိုအား ... ။ more >>
သမုဒ္ဒရာစူးစမ်းရှာဖွေရေးတည်နေရာအဘို့ကို Global Foundation မှ: Rhode Island RI ကအမေရိကန်ကျနော်တို့ထိပ်တန်း-performing ကန်ထရိုက်တာဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာနေ (ဗီဒီယိုကင်မရာများဆေးထိုးခြင်းနှင့်အရိပ်အမေရိကန်နိုင်ခြင်း ... နောက်ထပ် >> ။
ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာ
Duke တက္ကသိုလ်နှင့် Duke တက္ကသိုလ်ကနျြးမာရေးစနစ်တည်နေရာ: ထိုကဲ့သို့သောကို Adobe Photoshop ကိုအဖြစ် Durham Microsoft Office သို့မဟုတ်ညီမျှအတွက် NC အမေရိကန်ဆော့ဝဲစာကျွမ်းကျင်မှုအပေါင်းမာလ်တီမီဒီယာဆော့ဖ်ဝဲ, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက်, Premiere က Apple ကို Motion, နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို ... ပို >>
Digital အရှိန်အဟုန်မြှင့် - တစ်ဦးသည် သာ. ကောင်း၏ချိတ်ဆက်ကမ္ဘာ့ဖလားတည်ဆောက်ခြင်း
by: CommunicAsia2016 Rapid မှာအလန် Marcus, အိုင်စီတီအစီအစဉ်ဌာနမှူး, စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ, ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်နှင့်နာယက, အာရှအိုင်စီတီဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာတိုးတက်မှုလူ့အဖွဲ့အစည်းပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ (2007 အတွက်ထိပ်တန်း-of-the-range ကိုစမတ်ဖုန်း $ 499 ကုန်ကျ; အလားတူသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူတစ်မော်ဒယ် 10 အတွက် $ 2015 ကုန်ကျ) အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ၏သိသိသာသာကျသွားကုန်ကျစရိတ်စီးပွားရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတော်လှန်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် '' combinatorial သက်ရောက်မှု '' ...
broadcast အာရှ 2016: စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ညီလာခံ Options ကို!
BroadcastAsia 2016 ဒီနှစ်တက်ရောက်ဖို့အများကြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ညီလာခံရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းနေပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအမြဲကြည့်ရှုရောက်ရှိအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းများကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရွေ့လျားခြင်းနှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် IP ကိုအခြေပြုအသံလွှင့်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်ပိုမိုတတ်ကျွမ်းနည်းလမ်းများမှတဆင့်ဖြစ်စေတအခြေခံက "ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်ထိရောက်သောကုန်ကျခံရ" အတူတူပင်ဖြစ်နေဆဲ workflows ။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်း ...
စာချုပ်အသံလွှင့်ကို Maintenance Engineer အ
နှစ်ဆယ်ရာစုမြေခွေးတည်နေရာ: Los Angeles မြို့, CA အမေရိကန် FOX NE & အိုလက်ရှိစာချုပ်အသံလွှင့်ကို Maintenance Engineer အရှာကြံနေပါတယ်။ HD ကို-SDI / 4K ကဗီဒီယိုကို formats အပါအဝင်ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာအားကောင်းတဲ့အသိပညာ ... နောက်ထပ် >>
Up ကို 30,000 ခြေ မှစ. အစီရင်ခံ - ဤတွင် #BroadcastAsia ကျနော်တို့ လာ. ကြည့်
... ထိုအပယ်သွားကြှနျုပျတို့သညျသှား! ကျနော်တို့ BroadcastAsia 2016 များအတွက်စင်္ကာပူမှငါတို့လမ်းအပေါ်, လေထုထဲတွင်တက်သုံးဆယ်သုံးရက်-တထောင်ခွကေိုတရားဝင်များမှာ! ခါတိုင်းလိုအဖြစ်, စိတ်လှုပ်ရှားမှုငါ့အဆင့်ကိုငါ့ကိုအခြေချ-down မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ငါလေယာဉ်ပေါ်မှာစဉ် blogging စတင်ဖွင့်! (ဤသိသာထင်ရှားတဲ့တစ်အလေ့အထဖြစ်လာ !!!) ကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာယခုနှစ် - အသံလွှင့် Beat အာရှအတွက်အစီရင်ခံပါလိမ့်မည်ကြောင်းပါ! ...
စာချုပ်အသံလွှင့်ကို Maintenance Engineer (အနောက် Los Angeles မြို့)
Twentieth Century Fox တည်နေရာ - လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ အေ။ အက်စ်။ ကန်ထရိုက်အသံလွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအင်ဂျင်နီယာသည်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အိုင်တီနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလွန်စက်ပစ္စည်းများကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှပြုပြင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ … More >>
4 ၏စာမျက်နှာ 64«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»